Diagnosis Molecular, plastika ankapobeny amin'ny lab - Lifan
Izahay dia ao amin'ny orinasa, ka tsy mila izany.
Shenzhen City Lifan Century Technology Co., ltd. dia mpanamboatra OEM namboarina ho an'ny fitaovana ara-pitsaboana sy laboratoara ara-pitsaboana azo ampiasaina amin'ny fikarohana siansa fiainana. Manam-pahaizana manokana momba ny famokarana plastika avo lenta ho an'ny fikarohana siansa fiainana sy ny vokatra miaro OEM COVID-19 miorina amin'ny filan'ny mpanjifa ny LIFAN. Nandefa vokatra azo ampiasaina mihoatra ny 200 izahay ho an'ny biolojika azo ampiasaina, fitaovana plastika ankapobeny, vokatra azo ampiasaina amin'ny fitsaboana COVID-19.
Biolojika molekiola azo ampiasaina- Torohevitra Pipette
Biolojika mololo azo ampiasaina- Takelaka be fantsakana
Biolojikaola azo ampiasaina- Torohevitra Robotic
Covid-19 Fitsaboana azo ampiasaina- fonon-tanana
Biolojikaola azo ampiasaina- fantsona PCR
ghther ny vaovao farany momba ny milina sy ny fitaovana avo lenta
Mpamatsy entana azo ampiasaina amin'ny laboratoara avo lenta
Ry mpiara-miasa malala ： Misaotra antsika rehetra tamin'ny fanohananao nandritra ny taona 2020. Fotoana sarotra tamin'ny COVID-19 saingy nandalo ireo zava-tsarotra rehetra izahay tamin'ny taona lasa. Andao hitehaka noho ny ezaka lehibe sy ny fahombiazantsika. Manakaiky ny Fetin'ny Lohataona 2021, ny mpiasa rehetra ao amin'ny tanànan'i Lifan amin'ny taonjato Lifan ...
Ho an'ny ankamaroan'ny olona, ​​tena tsy hitovy ny Krismasy amin'ity taona ity. Amin'ity lahatsoratra ity dia manome torohevitra fototra 5 izahay hanampiana ny fahasalamanay mandritra sy aorian'ny fetin'ny fialantsasatra 2020. Isan'andro, ny mpahay siansa dia mianatra bebe kokoa momba ny fomba fiasan'ny SARS-CoV-2, ary ny vaksinina dia mihodina. Eny, efa niady ny 2020 ...
Ny indostrian'ny diagnostika in vitro farany teo dia nitondra vanim-potoana fampandrosoana haingana
Novel coronavirus pneumonia novel coronavirus pneumonia no laharam-pahamehana indrindra amin'ireo laharam-pahamehana. Ny indostrian'ny pnemonia coronavirus (IVD) dia hivoatra haingana amin'ny fivoaran'ny teknolojia vaovao isan-karazany sy ny catalysis ny pnemonia satro-boninahitra vaovao. Heverina fa hiroso amin'ny ...